Ruvengo rweUNWTO rweWTTC Inosanganisira iyo Tweeted Rudo Mufananidzo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hurumende Nhau » Ruvengo rweUNWTO rweWTTC Inosanganisira iyo Tweeted Rudo Mufananidzo
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • misangano • nhau • vanhu • Kuvakazve • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau
Julia Simpson, CEO mutsva weWTTC, naZurab Pololikashvili, UNWTO Secretary-General, vaive vachidya kudya kwemanheru pamwe chete muLondon.
Iyi yaive vhezheni yakatarwa yemufananidzo yakangotumirwa netepiki nemupi wezano weUNWTO Anita Mendiratta.
Nehurombo iyi haisi iyo nyaya izere.
Akabatwa mumoto unoputika ndiMaribel Rodriguez, VP weWorld Travel uye Tourism Council.
NeSaudi Arabia ichisimudza mukana wekuti mari inobhadharwa yepasi rose ibhadharwe mari zvakanaka, mutemo wakasimbiswa wekuregeredza masangano akazvimirira uye kusavapo kwekubatana kweECOVID-19 nenguva neUNWTO hakuchina kugadzikana.
Kuputika kwekurambwa kuWTTC na 1977-akaberekerwa UNWTO Secretary-General Zurab Pololikashvili kuRitz Carlton Hotel Riyadh iri mukuda kwekukurumidza kugadzirisa.
Chipangamazano wepamusoro uye chipangamazano wevamiriri vaviri vekupedzisira veUNWTO Secretary General, Anita Mendiratta, akauya kuzonunura aine pikicha isingafadze yaakatora kuresitorendi yeLondon.
Tourism iri munyatwa, uye vese vane chekuita neHurumende kushanda pamwechete ndiyo chete nzira yekumberi. UNWTO ndiyo yaive huru yakasarudzika.
Iyi pfungwa yaifanirwa kuchinja neSaudi Arabia yakagadzirira kubuda semutungamiri mune ino mamiriro uye kuisa mari kumashure kwayo, mabhiriyoni emadhora akapihwa kune mumwe ruoko kubatsira hupfumi hwenyika hwekushanya.
Senge kunze kwenyaya yevasori, UNWTO Zurab Pololikashvilli, achitungamirwa nemupi wezano wepamusoro, Anita Mendiratta, akatanga kuita chiito. Zurab yaigara yakanaka kutungamira zvinoenderana nemaonero. Mukushandisa zita rakanaka remangwana risingazive WTTC CEO, Zurab's propaganda muchina yakavhurwa, uye akabatwa.
Rangarira? Izvi zvaive muna Chivabvu 2017
Secretary-General weUNWTO, Taleb Rifai, aratidza kutenda kwake kwechokwadi kuWorld Travel & Tourism Council (WTTC) nekubatana kwakasimba pakati pemasangano ese ari maviri.
Mumakore matanhatu apfuura, UNWTO neWTTC zvakagadzira kudyidzana kwakasimba, zvichiunza zvikamu zveveruzhinji uye zvakazvimirira pamwechete kufambisira mberi kushanya nekugadzirisa zvinhu zvinonyanya kukoshesa.
Mune UNWTO uye WTTC Vhura Tsamba paKufamba neKushanya Initiative yakatangwa muna 2011, rutsigiro rwakatorwa kubva pamusoro pevanopfuura makumi masere Misoro yeHurumende neHurumende pasirese. Nechiitiko ichi, UNWTO neWTTC vanovavarira kusimudzira kukosha kwenzvimbo yezvekushanya mukusimudzira kweupfumi pamwe nehupfumi padanho repamusoro.
Uku kudyidzana pakati peUNWTO neWTTC kwakaramba kwakasimba kusvika Zvita 31, 2017. Kuziva kukosha kwekudyidzana kweruzhinji-kwakazvimiririra kwechikamu, zvaive zvakakosha kuti Secretary-General arikubuda, Taleb Rifai, kukoka mukuru achangogadzwa WTTC CEO, Gloria Guevara, kuenda kuUNWTO General Assembly kuChengdu, China, muna 2017.
Mutungamiri weWTTC muna2017, Gloria Guevara, aive Gurukota rezvekushanya kuMexico muna2011.Mexico yakava nyika yekutanga muna Kukadzi 2011 neMutungamiri weMexico, Calderon, achisaina chibvumirano chekushanyirwa cheUNWTO / WTTC chakatemerwa misoro yenyika makumi masere pasirese.
Gurukota rezvekushanya kuMexico, Gloria Guevara, achibva kumaindasitiri akazvimirira, akanyatsonzwisisa kukosha kwezvikamu zviviri (zvakavanzika & zveruzhinji) kuti zvishande pamwe chete.
Izvo zvaisazivikanwa mu2017 kuti achangosarudzwa UNWTO Secretary-General, Zurab Pololikashvili, aive nezvirongwa zvakasiyana, uye havana kusanganisira WTTC.
Kuchinja kwakaita UNWTO husiku humwe muna Ndira 1, 2018
Musi waNdira 1, 2018 Zurab Pololikashvili akatora chigaro cheUNWTO.
Makore matatu gare gare nyanzvi dzinobvumirana, aifanira kunge asina kumbokwanisa kuita izvi.
Kubatira kweUNWTO kuchengetedza kusarudzwazve kwaMunyori-Mukuru Zurab Pololikashvili kunoenderera.
Anouya Secretary-General weUNWTO uyo asati ashandira UNWTO aishanda seMumiriri weMadrid kunyika yake, Republic of Georgia, anga asina ruzivo munzvimbo dzakazvimirira nekushanya.
NaZurab vachitora chigaro cheUNWTO, IATA, ICAO, uye WTTC vakarasa chimiro chavo.
Pa 2018 UNWTO General Assembly muSt. Petersburg, Russia, Zurab yakabvisa akawanda ehurongwa hwe WTTC yekuita pachirongwa chepamutemo uye akaita kuti WTTC CEO igare kuseri kwemba.
Zurab isina kubudirira yakakurudzira iyo Spanish yekufamba show, FITUR, kusa-kukoka WTTC muna 2019.
Zurab yaida kuti WTTC Global Summit muna Chivabvu 2021 muCancun ikundikane ndokusundidzira Hurumende yeDominican Republic kuronga musangano wedunhu UNWTO kupokana nemazuva eWTTC Summit.
Zvinoshamisa kuti CEO weWTTC Gloria Guevara anga akoka Zurab kuenda uye kutaura kumusangano, asi, chokwadi, izvi hazvina kuitika. Nhengo dzeWTTC dzakatsamwa, uye tiye Gurukota Rezvekushanya kuDominican Republic akakumbira ruregerero ndokumbomisikidza chiitiko cheUNWTO.
Izvi zvaive May 27, 2021, muRiyadh, Saudi Arabia
Pamhemberero ye opening yenzvimbo yeUNWTO yedunhu muRiyadh, Saudi Arabia, UNWTO Secretary-General Zurab Pololikashvili akabatanidzwa naHer Royal Highness Mambokadzi Haifa Al-Saud, Mutevedzeri wegurukota rezvekushanya kweChirongwa neInvestment, uye Gurukota rezveHurumende Yezvekushanya, Honourable Ahmed Al Khateeb ku kuvhura zviri pamutemo hofisi.
Ivo zvakare vakabatanidzwa neveVakuru veVashanyi kubva mhiri kweMiddle East uye kubva kunharaunda dzese dzepasi rose, pamwe nevatungamiriri vanobva kumasangano akazvimirira.
Iye Hon. Gurukota Edmund Bartlett vanobva kuJamaica uye Hon. Gurukota Najib Balala vaipinda chiitiko ichi, apo Zurab Pololikasvili aikonzera chiitiko chakapupurirwa muhotera yehotera yeiyo 5-nyeredzi Ritz Carlton Hotel muRiyadh.
Nei Zurab yaive neutsinye kuna Maribel Rodriguez?
Zurab zvine ruzha yakadaidzira kusashevedza WTTC kubva pakuenda kuvhurwa kweUNWTO Regional Center muRiyadh, Saudi Arabia musi waMay 26, 2021
Nekudaro Mutevedzeri weMutungamiri weWTTC, Maribel Rodriguez, akabvunzwa nemurongi kuti asapinda mumhemberero iyi. Pane imwe nguva, Zurab akatyisidzira kusiya chiitiko ichi nevanhu vake makumi masere kana Maribel Rodriguez anobva kuWTTC aibvumidzwa kupinda.
Maribel Rodriguez aive achimiririra zviri pamutemo Gloria Guevara, CEO we World Kufamba neKushanya Kanzuru (WTTC). Akaenda nendege achibva kumba kwake kuMadrid, Spain.
Kumiririra makambani makuru epamabhizimusi epasirese pasirese, WTTC ine basa rakakosha kuratidza kuti yakazvimirira uye yeruzhinji chikamu cheindasitiri yekufamba chakabatana.
Pasina hutungamiriri neUNWTO, WTTC yakakwanisa kuunza vatungamiriri vazhinji kubva kubazi rezvevanhu kuti vaende kumusangano wemasangano vhiki nevhiki padenda reCOVID.
Maribel Rodriguez akabatana neWTTC muna 2014. Akavaka netiweki yakakura mukati meindasitiri yeTravel neKushanya yeruzhinji neyakavanzika, achiunganidza makore anopfuura makumi maviri ekutengesa, kushambadzira, kutaurirana, uye ruzivo rwekutengesa muEurope neLatin America muindasitiri yendege neyekugamuchira vaeni.
Aive Executive Commerce Director uye Nhengo yeBhodi yeTravelodge Hotels Spain kubva muna2008 kusvika 2014.
Asati adaro, akapedza makore gumi nerimwe ari muindasitiri yendege, achiwana ruzivo rwakakura muzvinhu zvese zvekushambadzira nendege, achitarisira pakati pevamwe kuunzwa kwenzvimbo dzendege mumutengo weSouthern Europe weVirgin Express, Go-Fly, EasyJet, uye Ryanair. Akashandawo kuBritish Airways kuSpain, Portugal neFrance. Maribel ane Executive MBA kuICADE Bhizinesi Chikoro, Degree mu Industrial Psychology kubva kuYunivhesiti yeSalamanca, uye akabata Senior Executive Chirongwa cheKufamba neKushanya kuIESE & JSF. Anotaura Chirungu zvakanaka, Portuguese, uye nhanho yakanaka yechiFrench neDutch.
Maribel ndiye mugari wekutanga weSpanish ane iyi mhando yemahofisi makuru muWorld Travel uye Tourism Council.
Maribel aisada kuwedzera kune nyonganiso yaiitika kuRitz Carlton Hotel muRiyadh. Iye aisada kuve chikamu chemutambo wekudanidzira, uye aisada kunyadzisa uyo akagamuchira - Hurumende yeSaudi Arabia.
Mushure mekunge audzwa kuti aive asisagamuchirwe, akanakidzwa nezvakanaka zvivakwa zve Ritz Carlton Riyadh hotera panzvimbo. Akaramba achiendesa hurukuro yake pfupi iyo yaigara yakarongerwa zuva raitevera.
Nei Anita Mendiratta's propaganda tweet nezuro yakakosha?
Ehezve, hurukuro dzemari -zvowo kuUNWTO - uye mari yekushanya inobva kuSaudi Arabia mazuva ano.
Naimbova CEO weWTTC Gloria Guevara ava kushandira Hurumende yeSaudi Arabia, Zurab aifanira kugadzirisa mamiriro aakakonzera muRiyadh.
Wepamusoro chipangamazano uye akasarudzika shamwari yepedyo kuna UNWTO Secretary Zurab Pololikashvili chipangamazano weSouth Africa (zvino anogara muLondon) Anita Mendiratta. Anita akange ave zvakare chipangamazano wepamusoro kuna Dr. Taleb Rifai, aimbova Secretary-General weUNWTO.
Panguva iyi Dr. Taleb Rifai akange anzwikwa achitaura achipokana Zurab Pololikashvili pachena.
Anita ndiye munhu akaronga chinyararire musangano pakati paZurab Pololikashvili naJulia Simpson mwedzi yakati wandei apfuura Julia asati atanga basa rake kuWTTC.
Musangano uyu wakaitika muresitorendi yemhando yepamusoro muLondon muna Chivabvu nguva pfupi yapfuura mushure mekunge WTTC yazivisa kugadzwa kweMutungamiriri weInternational Airlines Group (IAG), Julia Simpson, seMutungamiriri wayo uye CEO, anoshanda Nyamavhuvhu 15.
Julia anga asati achishandira WTTC, asi yeIAG, paakasangana naZurab. Iye zvakare anga asina kuudzwa nezve rake basa nyowani sa CEO weWorld Travel uye Tourism Council.
Ehe, Julia anga asingazive nezve kunetsana pakati peUNWTO neWTTC uye pikicha yakachengetwa yakavharwa naAnita Mendiratta kwemwedzi ingangoita mina Zurab naAnita vasati vatumira tweet - nekuda kwechikonzero chakasiyana.
UNWTO yekunyepedzera kuyedza kugadzirisa hukama neWTTC
Kuregeredza makore eakafambiswa ekutaurirana uye zviitiko zvakaiswa pasi peakange apfuura eUNWTO manejimendi, nekutsausa veruzhinji mukutumira iyi tweet nemufananidzo wekare, zvekare muenzaniso wekare wekuti Secretary General arikubiridzira sei nzira yake yekumberi. Izvi zvinogona kuve zvitsva kubva muJames Bond bhaisikopo.
Uyu munyori akapindura tweet yakatumirwa naAnita Mendiratta achiti:
Nekuremekedza kwese kwakakodzera Anita, iyi yakachipa propaganda posvo.
Mushure mechiitiko chakakonzerwa naZurab muSaudi Arabia, zviri pachena kuti anovenga WTTC uye anonzwa kutyisidzirwa navo vachiita chimwe chinhu chakakura uye kusanganisira chikamu cheveruzhinji. Ndinofanira kutaura zvimwe here?